ရောဘတ်လိုင်ဘာမင် ရိုက်ကူးသည့် They Call it Myanmar ဇာတ်ကား အမေရိကန်တွင် ရုံတင်ပြသ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » ရောဘတ်လိုင်ဘာမင် ရိုက်ကူးသည့် They Call it Myanmar ဇာတ်ကား အမေရိကန်တွင် ရုံတင်ပြသ
ရောဘတ်လိုင်ဘာမင် ရိုက်ကူးသည့် They Call it Myanmar ဇာတ်ကား အမေရိကန်တွင် ရုံတင်ပြသ
Posted by နွယ်ပင် on Mar 21, 2012 in Entertainment, Movies/TV, News | 12 comments
အမေရိကန် ပါမောက္ခ ရောဘတ်လိုင်ဘာမင် ရိုက်ကူးခဲ့သော မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားဖြစ်သည့် They call it Myanmar:Lifting the Curtain ကို အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု၏ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ထားသောရုံ များတွင် စတင် ပြသလျက် ရှိနေသည် ဟု အေပီ သတင်း တစ်ရပ်အရ သိရသည်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ကို ပါမောက္ခ ရောဘတ်လိုင်ဘာမင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်တွင်းမှ ရုပ်ရှင် ထုတ်လုပ်သူများ အားလေ့ကျင့်ပေးရန် သွား ရောက်ရာ တွင် ၄င်း၏ ကိုယ်ပိုင် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ထိုဇာတ်ကားက သတိမူမိစေရန် ပြုထား သည်မှာ မကြာသေးမီက မြန်မာနိုင်ငံသည် စွန့်စားမှုနှင့် မကင်းသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ ရာတွင် အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်း၊ ဆင်ဆာဖြတ်မှုများကို ဖြေလျှော့ ပေးခြင်းများကိုမြင် တွေ့ရ သော်လည်း ပြဿနာအချို့ ဆက်လက်ကျန်ရှိ နေနိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ပါမောက္ခ ရောဘတ် လိုင်ဘာမင် (၇၁) နှစ်သည် ကော်နယ်တက္ကသိုလ်တွင် ပုံမှန်အလုပ်ဖြစ်သော ရူပဗေဒ သင်ကြားခြင်း ကို ရပ်နား၍ မြန်မာနိုင်ငံ သို့ နှစ်နှစ် အတွင်း အကြိမ်အချို့ လာရောက်ခြင်းပြုခဲ့သည်။
အစပထမတွင် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သော Fulbright ပရိုဂရမ် အစီအစဉ်အတွက် လာရောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာသတိ ပြုဖွယ် ရာများ ရိုက်ကူးမှုတွင် အကူ အညီပေး ခဲ့ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဓိက တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုတွင် ရုပ်ရှင်ဆိုင်ရာများကို သင်ကြားပြသပေးခဲ့သည်။ သူသည် ထိုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ တွင်လာရောက်နေစဉ် အတွင်း နာရီ ၁၂ဝ တာမျှ သူ၏ ကိုယ်ပိုင် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်း ပိုင်းများကို ရိုက်ကူး စုဆောင်းမိလာ ခဲ့သည်။
ထိုမှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ကား၏ တစ်စိတ် တစ်ဒေသနှင့် ခရီးသွား မှတ်တမ်း၏ တစ်စိတ် တစ်ပိုင်းတင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်လိုဖွယ် ဆွဲဆောင် မှုများ၊ သိလိုစိတ်ပြင်းပြသော နှုတ်ပိတ်နေသည့် စကားသံများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း များကိုထည့် သွင်း ဖော်ပြ ထားသည်။ ၄င်းက သူ၏ အမြင်များနှင့် အမည်မဖော်ပြဘဲ ပါဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ ၏ဇာတ် ကြောင်း ပြန်ပြောပြချက်များဖြင့် တင်ဆက် ထား သည်။ လိုင်ဘာမင်က ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြား ဂျာနယ်လစ် များ ဝင်ရောက် ခွင့်ပြုပြီး သတင်းရေးသားခွင့်ပြု နေသည့်အပြင် လူ့အ ခွင့်အရေး၊ လူမျိုးစုပဋိပက္ခကဲ့သို့ သောပြဿနာ ကိစ္စရပ်များကို အများပြည်သူ အကြားတွင် အချေအတင် ဆွေးနွေးခွင့် ရရှိနေပြီဖြစ်သည် ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
သူကြီးကိုသွားကြည့်ခိုင်းပြီး ပြန်ဖြန့်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ် ….
သဂျီးအူးကိုင် က အဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါ ၊ ဗီဒီယိုကင်မရာလေးနဲ့ ပြန်ရိုက်လာပြီး ၊ ရွာသူားများ ကို ပြန်ရှဲပေးမယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ ကျွန်ုပ် မောင်ပေ မှ ဘာမှ မဆိုင်ဘဲ ဝင်ကြေငြာလိုက်ရပါသည် ။ ဟီဟိ
ဖြစ်နိုင်ရင် နွယ်ပင်လည်း အရမ်းကြည့်ချင်နေတာပါ ……….
သဂျီးရေ တောင်းဆိုနေကြပါတယ် ရွာသူားတွေက ………..
အဲဒီကားကို.. အမေရိကရဲ့.. မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် တောင်းထားပါတယ်..။
ဒီနှစ်စက်တင်ဘာလလောက်မှာမှ.. မြန်မာပြည်က.. ရုပ်ရှင်ကား၂ကားနဲ့.. တွဲပြမယ်ဖြစ်ကြောင်း…
ဒါရိုက်တာချိုတူးဇော်ရဲ့.. “လွမ်းစိမ့်”ကို.. ဧပြီ၂၈မှာ.. အယ်လ်အေမှာပြမှာဖြစ်ကြောင်း…
ရွာကိုရော ဘယ်တော့အလှူပေးမလဲ သိချင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ သူကြီး ရန်ကုန်အမေရိကန်စင်တာကို သတင်းစာက ၃ စောင်ထဲပို့တော့ မန္တလေးက လူတွေ ဘယ်ဖတ်ရတော့မလဲ ။ မန္တလေးက အမေရိကန်စင်တာကိုပါ ပို့ပေးလို့ မရဘူးလားဟင်……
မန္တလေးက အမေရိကန်စင်တာလိပ်စာကို.. အီးမေးလ်နဲ့ပို့ပေးပါလား…
နွယ်ပင်ရေ- ကိုကိုဂ နဲ့အတူ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ သတင်းဦး သတင်းထူးလေးတွေ တင်တတ်တဲ့ စုံတွဲလေးကို ကျေးဇူးနော်။